महरा प्रकरणः हाम्रो नेतृत्व किन बलात्कारिलाई मृत्युदण्डको व्यबस्था गर्न सक्दैन? – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन १४, मंगलवार ११:५४
नेकपाका नेता तथा प्रिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आफ्नै सचिवालयकि कर्मचारि माथि यौन दुर्व्यबहार गरेको घटना बाहिर आएपछि सत्तासिन व्यक्तिहरुनै यौन दुराचारमा फसेपछि नेपालको विश्वमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने बिषयमा टिका टिप्पणि हुन थालेको छ । लामो समय राजनीतिमा जिवन ब्यतित गरेका महरा पदको दुरुपयोग गरि मानविय संवेधनामाथि खेल्न पुगेको तथ्य यो घटनाबाट स्पसष्ट हुन आउँछ ।
पिडित महिला कर्मचारिकोमा पुगेर प्रहरिले गरको अनुसन्धानमा भेटिएको मदिराको बोटल, कपडा तथा सिसिटिभि फुटेज र महिलाको शरिरमा भेटिएका निल डामले महरा पुर्ण रुपमा दोषि रहेको सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ । कानुनी रुपमा पष्टि हुन बाँकिरहेका कुराको सत्य तथ्य बाहिर आउने आशामा सबै नेपाली जनता रहेको आवस्था छ ।
महरा सभामुख भएश्चात उनको जिवनशैली र उनका आसेपासेमा गरिएका भोजभतेरलेनै महरा विलासि र सत्ता दुरुपयोगको हदै सम्म पुगेको भेटिन्छ । महराकोमा खाघ्यान सामाग्रिको आपुर्ती कर्ताका अनुसार महराको लागी मासिक लाखौंको खाघ्य सामाग्री आपुर्ती गर्ने गरेको बताउँछन् ।
उसो त नेकपाले सत्ता समाले पछिको निर्मला हत्या प्रकरणको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सत्ता र सरकारबाट लुकाइएको हो निर्मला प्रकरण भन्ने जनमानसको दावा पनि एकातिर त छंदै छ । यतिखेर सम्पुर्ण नेपालीमा महरालाई कुन प्रकारको कारबाहि होला त ? अनि महिलाको चरित्रमाथि खेल्ने व्यतिलाई के अहिलेकै कानुनि दायरा ठिक छ त ? यो प्रश्न झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
लामो संघर्ष वाट पाएको उपलब्धिको महत्व अझै पनि हत्या, हिंशा अनि बलात्कारका घटना दोहोरिनु हो ? सरकारले यसको जवाफ जनतालाई दिनु जरुरि छ । मुलभुत प्रश्न त के हो भने यति धेरै परिवर्तन भयो नयाँ संबिधान बन्यो नयाँ व्यबस्ता आयो तरपनि के नेपाली शुरक्षित हुन पाए? जनताको लागि संबिधान बनाउन सक्ने हाम्रो नेतृत्वले संबिधान संसोधन गरेर किन बलात्कारि/यौन दुराचारिलाई मृत्युदण्दको व्यबस्था गर्न सक्दैन ? कि सत्तामा निर्लिप्त महरा जस्तालाई बढावा दिनु हो ? सरकारले जवाफ दिनु जरुरि छ । कित यो भन्नु पर्यो कम्युनिष्टको सरकारमा यौन दुराचार गर्न ठिक छ ।